२८ वर्षीय राजनलाई दुई वर्षीय छोराले दिए दागबत्ती , यो देख्दा म’ला’मी सबैका आँखा रसाए ! – AB Sansar
२८ वर्षीय राजनलाई दुई वर्षीय छोराले दिए दागबत्ती , यो देख्दा म’ला’मी सबैका आँखा रसाए !
November 6, 2020 adminLeaveaComment on २८ वर्षीय राजनलाई दुई वर्षीय छोराले दिए दागबत्ती , यो देख्दा म’ला’मी सबैका आँखा रसाए !
२८ वर्षीय राजनलाई दुई वर्षीय छोराले पा”र्थिव शरीरमा दा:गबत्ती दिए,म,ला:मी सबैका आँखा रसाए ।
राजविराज, कार्तिक २१ । कात्तिकको चिसो बुधबारको मध्यरात निष्पट्ट अन्धकार छ। राजविराज–हनुमाननगर सडकखण्डमा रहेको खाँडो खोलाको किनारमा शीतले लपक्कै भिजेको जमिन छ। केही परिवारका सदस्य र नजिकका साथीहरूको उपस्थिति छ। खोला किनारमा खनेको खाल्डोमा शव राखिएको थियो। २ वर्षीय बालकले मसिनो स्वरमा ‘पापा पापा’ भन्दै मुखाग्नि दिइरहेका थिए। त्यो आगोको रापले भने मलामी गएकाहरूको मन पोलिरहेको थियो। ****यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला****
कोभिड–१९ को कहरबीच नियमित फार्मेसी सञ्चालनमा खटिएका राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालका फार्मेसी सहायक २८ वर्षीय राजन साफीले सधैँका लागि छाडेर गएपछि उनका दुई वर्षीय छोराले बुधबार राति पा र्थि व शरीरमा दा गब त्ती दिए।
बालकले काका साजनको अँगालोमा बसेर लामो लाठीको एक छेउ समाती टुप्पोमा बालेको बत्तीले बुवालाई मु खा ग्नि दिइरहेका थिए। त्यो दृश्यले राजविराजस्थित खाँडो खोलाको घा टमा बुधबार मध्यराति गएका म ला मी सबैका आँखा रसाए।****यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला****
April 25, 2021 santosh
मुख्यमन्त्रीलाई बहुबिबाहको मु,द्धा हाल्दै बालिका,दुई जनाकै कान समातेर घुमाउछु..यस्ता पापीलाई छोड्नु हुदैन भन्दै रि,साइन_balika( भिडियो हेर्नुस)
January 30, 2021 Ab-संसार